Isiqinisekiso sethu - IMOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Ukuqwalaselwa kobungcali, ukhathalelo lobungcali
Ulawulo loMgangatho we-MOLONG ukusuka ekuFezekiseni ukuhanjiswa
Ukhe uzibuze ukuba zeziphi iimveliso ze tattoo ezisandula ukuthengwa ezivela e-China? Kwa-MOLONG, nangaphambi kokuba iodolo yakho ibekwe nokuba yeyivenkile, umhambisi, okanye umntu ojonge nje ukuthenga igajethi yamva nje-iimveliso zethu zilungelelaniswe nenkqubo ekhangela kwaye iphinda itshekishe umgangatho, ukusuka ekufumaneni ukuya ekuhanjisweni.
Ukufezekisa iimveliso zakho
Iqhubekekisa iodolo yakho yemveliso
Ukuvavanya iimveliso zakho
Ukulandelela iimveliso zakho
Iqhubekekisa uMyalelo weMveliso yakho
Emva kokufumana intlawulo yakho (Ayinamsebenzi idiphozithi okanye intlawulo epheleleyo), abahlobo bakho eMOLONG entwasahlobo bathathe amanyathelo kwaye kwangoko baqala ukuqhuba iodolo yakho.
Abasebenzi bethu baphonononga iinkcukacha zodolo lwakho kunye nokuqhubekeka kweeodolo zakho. Ukuthengisa kwakho kuya kugcina umkhondo kwiiodolo zakho.
Nangona abathengisi bethu bonke bengabenzi abathembekileyo bezinto ezisemgangathweni, asithathi mathuba nge-odolo yakho ethile.
Zonke iimveliso zihamba ngenkqubo ye-QC epheleleyo:
Yonke into ihanjiswa kuqala kwiZiko lethu loSasazo lwaMazwe ngaMazwe apho iqela loqeqesho eliqeqeshwe kakhulu livavanya iimveliso zakho ngokusekwe kwimigaqo engqongqo kunye neemfuno zokuhlola. Kwaye iimfuno zethu ziphezulu: ziipesenti ezingama-80 kuphela zeemveliso ezikhethiweyo ezazinikwa istampu sokuvunywa kweli nqanaba Ngaba siyifumene iodolo yakho? Ngaphambi kokuba siqale ukupakisha, sijonga ngokuchanekileyo ukuthelekisa iiodolo ngokuchanekileyo.
Iqela lethu loLawulo loMgangatho emva koko linika imveliso yakho olunye uhlolo, ngaphakathi nangaphandle, kulandela iinkqubo ezingqongqo kunye neemfuno.
Ukuba imveliso iyahlangabezana nemigangatho yethu, siyinika isitampu sethu sokuvunywa. Ngoku ilungele ukuthunyelwa kuwe!
Isishwankathelo seenkqubo zethu zeQC
Ukupakisha okumiselweyo kunye neqela lokuhambisa libaleka njengewotshi, nokuba sitsho njalo ngokwethu. Izinto zihlala zivavanywa ngononophelo kuyo nayiphi na into enokwenziwa kunye neziphene kuyilo ngaphambi kokuba zithunyelwe kude kuqinisekiswe ukuba into oyithandayo kwi-Intanethi yinto oyifumanayo kwikhuriya yethu. Amalungu eqela lethu ajonga iziliphu zoku-odola ngesiqinisekiso sokuthenga esikwi-Intanethi, emva koko aqwalasele imveliso ekhutshwe kwishelufa ukuqinisekisa ukuba iyakhangela kwimveliso edwelisiweyo.
Ke, kuphela emva koko, ngaba iqela liqhubela phambili ekupakisheni iodolo, ukuphinda-phinda (kwaye ngokufuthi ngakumbi) kwibhodi yokugoba kunye neteyipu.
Okulandelayo, kungaphandle komnyango ezandleni ezikhuselekileyo kunye nabathumeli bethu abathembekileyo nabaqinisekisiweyo.
Nje ukuba imveliso yakho ishiye iingcango zethu, siqhubeka nokuyilanda ide ifike kweyakho. Iqela le-MOLONG lenkonzo yabathengi lihlala lisebenza emfihlekweni ukulungisa zonke iimfuno zakho kunye nemibuzo. Silanda ukuthunyelwa kwakho ngexesha lokwenyani, kwaye ziyafumaneka xa unakho ukuphendula nayiphi na imibuzo, nokuba nge-imeyile, ingxoxo ebukhoma, okanye ngomnxeba. Nokuba awuphi umcimbi, sihlala silapha ukukunceda.
Abahloli be-MOLONG emsebenzini
Umsebenzi weqela lethu lobuchwephesha awumi ngxi ujonge ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zikwimigangatho oyifunayo kwaye uyifanele.